ပိန်တယ် ဝတယ် ဆိုတာထက် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ် မယုံရင် ဒီကားလေးကို ကြည့်နော်... - MoviesFan Reviews
ပိန်တယ် ဝတယ် ဆိုတာထက် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ် မယုံရင် ဒီကားလေးကို ကြည့်နော်…
မိန်ကလေးတစ်ယောက် လှပဖို့အတွက်က ရုပ်ချောဖို့လိုလား? sexy ကျဖို့လိုလား? ခန္ဓာကိုယ်လှဖို့လိုအပ်တာလား? ဒါမှမဟုတ် ပိန်ဖို့လိုတာလား? အမှန်တော့ ဒါတွေတခုမှ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်အလှပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုတစ်ခုဘဲရှိဖို့ လိုအပ်တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လှဖို့အတွက် အဓိကအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်ဖို့ I FEEL PRETTY ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်လိုက်ရင် မလှဘူးလို့ထင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် အဓိက ငါဘာလို့အပ်နေတာလဲ ဆိုတာကို သိနိုင်မှာသေချာပါတယ်။
I FEEL PRETTY ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘာတွေကြောင့်ကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာတွေဘဲလိုအပ်နေနေ အားမငယ်ဘဲ ငါလှတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ နေထိုင်တက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ မင်းသမီး Amy Schumer ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး 2018 ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ အသစ်စက်စက်ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ သူမရဲ့ ဝနေတဲ့အခန္ဓာကိုယ်၊ ဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့ ရုပ်ရည်ကို တနေ့တနေ့စဉ်းစားပြီး စိတ်ညစ်နေရသူတစ်ဉီးပါ။ တနေ့မှာတော့ သူမဟာ gym ကစားနေစဉ် မတော်တဆ ခေါင်းထိခိုက်ပြီး သတိရပြန်ရလာချိန်မှာတော့ I FEEL PRETTY ဆိုတဲ့အတိုင်း သူမကိုယ်သူမ အရမ်းလှတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သတိပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူမက ဘာလုပ်လုပ် အမြဲပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် နေထိုင်ပြီး ဘာဘဲလုပ်လုပ် အောင်မြင်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အလှဆုံးဆိုတဲ့ ဝန်းထမ်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး အလုပ်ခန့်လေ့ရှိတဲ့ Cosmetic ကုမ္မဏီတစ်ခုရဲ့ reception တစ်ခုမှာတောင် အလုပ်ရသွားတဲ့အထိ သူမရဲ့ စိတ်ကသူမကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အကြောင်းကို ဒီလောက်လေးနဲ့ဘဲ ရပ်လိုက်တော့မယ်နော်။ မိန်းကလေးတိုင်း တကယ်ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးမို့ trailer လေးကနေ အရင်ဆုံးမြည်းစမ်းကြည့်ပေးဖို့ လက်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous Post: မိုးအေးအေးလေးနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ၃ ကား
Next Post: Fast and Furious အသစ်ထဲမှာ ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသားကို ကြေငြာခဲ့တဲ့ Dwayne Johnson